Iyo HomePod inosvika nekudonhedza muna Zvita, kuwanikwa kweAirPods kuchadzokororwa | IPhone nhau
Mutsamba yekupedzisira tinogona kuona huwandu hukuru hwezvinhu zvitsva, zvitsva zvave zvakajairika, ivo vane mwedzi yakati wandei vasati vasvika pamusika, pamwe Kutya kwaApple kuti kudonha kwacho kunogona kukanganisa kushamisika Iyo isu isu vakomana kubva kuCupertino tanga tajaira apo pavakazivisa "Chimwezve chinhu."
Muenzaniso wakajeka watinawo maAirPods. Apo akawanda mabloggi airatidzira patent yebheji yakafanana iyo yaive yakanyoreswa, Apple yakatizivisa kune aya asina waya mahedhifoni. Chimwe chinhu chakafanana chakaitika nePodPod, kunyangwe huwandu hwekudonha, mifananidzo uye zvimwe zvaive zvawedzera zvine njodzi kuApple, saka kumanikidzwa kuzviratidza zviri pamutemo asi kwete kuzviisa pakutengesa kusvika Zvita uye chete munyika nhatu: United States, United Kingdom neAustralia.
Inventec Appliances yakazivisa Apple kuti zvikamu zvePambaPod zvegore rino zvichave zvakanaka, uye ivo vacharamba vachivapo kusvikira Foxconn asinga batanewo mukugadzira kweiyi smart mutauri kana chero zvazviri chaizvo, nekuti Apple haina kujekesa chaizvo zvatingaite uye zvatisingakwanise kuita nePambaPod, zvinongogumira pachayo kuratidza dhizaini ichitaura kuti igudzanzwi uye ... kuitira kunyaradza runyerekupe rwese rwanga rwatanga kutyisidzira Apple nekuparadza kushamisika.
Sezvakatarisirwa, vaongorori vatotanga kupa huwandu hwezvikamu izvo Apple inogona kuisa mukutenderera kweiyi modhi, zvikamu zviri padyo ne500.000, zviverengero izvo zvinoenderana neInventec zviri kure kwazvo nezvazviri. Kana kubva zvino zvichienda, chishandiso chimwe nechimwe chitsva chinotangwa neApple chichava nekuderedzwa kwakadai uye inguva dzakadai dzekumirira, vakomana vanobva. Cupertino anozofanira kumira kuvapa kusvikira vagadzirisa matambudziko ekugadzira atakajaira mumakore apfuura.
Yeuka kuti runyerekupe rwakawanda runoratidza kuti Apple ichapawo yakaderera kwazvo kuwanikwa yeiyo iPhone 8, X kana chero zvazvinodaidzwa kunzi, zvakafanira, senguva dzose, kumatambudziko ekugadzira ayo airi kuve nawo nekuda kwechiratidziro chitsva chine anenge asina mafuremu, kana kumusoro kana pasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Iyo HomePod inosvika nekudonhedza muna Zvita, kuwanikwa kweAirPods kuchadzokororwa
Sekureva kweKGI, iyo Apple Watch Series 3 ichaenderera ichiratidza dhizaini yakafanana neshanduro dzekare